Hygrometerka oo ah aalad lagu cabiro qoyaanka | Saadaasha Shabakadda
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato waxyaabaha ku saabsan hygrometers-ka
Saadaasha hawada isbeddelada saadaasha hawada ee go'aamiya cimilada si isdaba joog ah ayaa loo cabiraa. Isbeddelada ugu muhiimsan waa cadaadiska Hawada, huurka, shucaaca qoraxda, jihada iyo xoogga dabaysha, iwm. Isbeddel kasta oo cimiladu wuxuu bixiyaa macluumaad qiimo leh oo ku saabsan cimilada wuxuuna kuu oggolaanayaa inaad sii saadaaliso waxa cimiladu noqon doonto maalmaha soo socda.
Maanta waxaan ka hadlaynaa hygrometer, aaladda loo isticmaalo in lagu cabiro huurka. Ma rabtaa inaad ogaato sida ay u shaqeyso iyo wax kasta oo la xiriira macluumaadka ay ku bixin karto saadaasha hawada.
1 Astaamaha ugu muhiimsan, taariikhda iyo yutiilitida
2 Fikradaha lagama maarmaanka u ah huurka
3 Noocyada hygrometer
3.1 Heerkulka mitirka
3.2 Hygrometer nuugista
3.3 Hygrometer koronto
3.4 Hoos u dhigaya mitirka mitirka
3.5 Hygrometers dijitaal ah
Astaamaha ugu muhiimsan, taariikhda iyo yutiilitida
Hygrometer-ka waa wax aan ka badnayn aalad loo isticmaalo in lagu cabbiro heerka huurka ee hawada, carrada iyo dhirta. Waxaan xasuusan nahay in huurku yahay qadarka uumiga biyaha ee deegaanka. Si qoyaanku u buuxsamo, heerkulka jawigu waa inuu hooseeyaa. Sidan oo kale, uumiga biyaha ee hawadu wuu ururaa oo wuxuu keenaa sayax.
Hygrometer-ka waxaa loo isticmaalaa in lagu cabbiro xaddiga uumiga biyaha ee hawada ku jira. Waxaa jira dhowr nooc oo hygrometers ah oo kuxiran howlgalkooda, in kastoo dhammaantood ay isku ujeeddo yihiin.
Hygrometer-ka waxaa ikhtiraacay Fiisigisyahan Faransiis ah Guillaume Amontos sanadkii 1687. Mar dambe ayaa la hagaajiyay oo la habeeyay Fahrenheit badhtamihii qarnigii XNUMX-aad. Waxay isticmaashaa dareemayaal garanaya oo tilmaamaya kala duwanaanta heerka qoyaanka, labadaba gaaska iyo hawada guud ahaan. Kii ugu da'da weynaa waxaa lagu dhisay dareemayaal nooca mashiinka ah. Dareemayaashaasi waxay jawaab ka bixiyeen walxaha u nugul kala duwanaanta qoyaanka, sida timaha dadka.
Codsiyada waa kuwo aad u ballaaran. Waxaa loo isticmaalaa labadaba ilaalinta alaabooyinka aadka ugu nugul huurka badan, si loo ogaado u dhawaanshaha roobabka suurtagalka ah iyo guud ahaan cimilada xun, si loo helo nadaafad wanaagsan iyadoo la ogyahay heerka huurka ee guryaha iyo qolalka. Waxaa sidoo kale loo adeegsadaa hawlo badan oo warshadeed u baahan qoyaan sida soo saarista dhar gaar ah, warqad iyo xariir.
Fikradaha lagama maarmaanka u ah huurka
Si loo fahmo hawlgalka saxda ah ee hygrometers, waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado fikradaha qaarkood ee huurka iyo sida ay u shaqeyso.
Tusaale ahaan, qoyaan qaraabo Waa fikrad aysan dad badani caddeyn. Uumiga biyaha waxaa laga soo saaraa waxqabadyada kala duwan ee aadanaha iyo, guud ahaan, noole kasta. Guryaha dhexdooda, uumiga biyaha waxaa lagu soo saaraa howlaha karinta ee jikada, qubayska, dhididka dhirta, neefsashada, iwm.
Uumi-biyoodkan la soo saaray ayaa waxaa nuugaya hawadu iyadoo ku xiran xaaladaha deegaanka, taasoo keeneysa kororka qoyaanka hawada. Sidaa darteed, xaddiga ugu badan ee uumiga biyaha ee geli kara hawada adigoon noqon mid dheregsan (taas oo ah, isu-ururin) waxay kuxirantahay heerkulka deegaanka. Markasta oo ay hawadu kululaato, uumiga biyo badan ee ay taageerto iyada oo aan lagu dhergin qoyaan. Marka taas Qoyaanka qaraabada waa xaddiga uumiga biyaha ee hawada ku jira boqolkiiba.
Fikrad kale oo la xiriirta ayaa ah qoyaan buuxda. Waa xaddiga uumiga biyaha ee mitirka cubic mitir uu ku jiro laguna muujiyo garaam halkii mitir cubic. Hygrometers sidoo kale waxay awood u leeyihiin inay cabbiraan barta saturation ee deegaanka iyadoo kuxiran heerkulka. Barta saturation waa ugu badnaan uumiga biyaha ee ku jiri kara biyaha heerkul gaar ah iyo cadaadis aan uumiga biyuhu isku soo ururin.
Waxay kuxirantahay nooca hawlgalka mitirka mitirka iyo astaamaha ay leeyihiin, waxaa jira noocyo kala duwan.
Noocaan ah hygrometer waxaa loo yaqaan 'hygroscope'. Hawlgalkeedu waa mid aasaasi ah. Waxay ka kooban tahay ku biirista koox timo kooxaysan oo qaab xarig ah. Timuhu waxay ka jawaabaan isbeddelada kala duwan ee qoyaanka ee ka diiwaangashan hawada adoo qalloocinaya ama kala bixinaya Markay taasi dhacdo, cirbad ayaa la hawlgaliyaa taasoo muujinaysa xaddiga huurka ee deegaanka, laakiin aan awoodin inay ku muujiso boqolley ahaan. Sidaa darteed, ma awoodo inay cabirto qoyaan isku mid ah.
Hygrometer-ka noocan ah wuxuu u shaqeeyaa iyadoo loo adeegsanayo qaar ka mid ah walxaha kiimikada hygroscopic-ka ee leh awood uu ku dhuuqo ama ku sii daayo huurka deegaanka, iyadoo kuxiran waxa jira. Maaddada Hygroscopic waa kuwa ku xira dhibcaha uumiga biyaha waana kuwa sameeya roobka.
Waxay ku shaqeysaa laba koronto oo nabarro muquun ah. Inta udhaxeysa labada koronto waxaa jira unug ku xajiimay lithium chloride biyo lagu qasay. Marka danab beddelaad ah lagu dhejiyo korantada, nudaha ayaa kululaanaya oo qaar ka mid ah biyaha lagu qaso lithium chloride ayaa uumi baxa.
Heerkulka kasta ayay dhistaa dheelitirka u dhexeeya xaddiga biyaha uumi baxa iyadoo la kululeynayo dharka iyo waxa nuugaya qoyaanka deegaanka, maaddaama ay ku xigto lithium chloride, walax aad u hygroscopic ah. Markay xaaladdu isbadasho, heerka huurka deegaanka waxaa lagu aasaasay si qumman.
Hoos u dhigaya mitirka mitirka
Mitirkan waxaa loo isticmaalaa in lagu go'aamiyo boqolkiiba inta qoyaan ee hawada ku jirta. Si tan loo sameeyo, waxay isticmaashaa heerkulka dusha sare ee dhalaalaya uu xumeeyo taasoo keeneysa heerkulka in si farshaxan ah hoos loogu dhigo.
Hygrometers dijitaal ah
Iyagu waa kuwa ugu casrisan ee jira oo isticmaala wareegyada elektarooniga ah si loogu beddelo kala-duwanaanta korantada yar yar ee ay keento kala duwanaanta guryaha qaarkood ee nambarrada lagu muujiyo shaashadda. Moodooyinka qaar ee hygrometers-yadan waxay isticmaalaan walxaha qaarkood hantidooda gaarka ah ay tahay midabka badala iyadoo kuxiran qoyaanka jawiga. Tan waxay ku heli karaan cabirro qoyaan badan oo sax ah.
Sidaad u aragto, Hygrometer-ku wuxuu leeyahay adeegsiyo badan oo xagga saadaasha hawada ah oo keliya maahan, laakiin nolol maalmeedka warshado, guryo iyo dhismayaal badan. Waxaa muhiim ah in la ogaado huurka deegaanka iyo sida ka wanaagsan ee loo isticmaali karo hygrometers-ka si loo cabbiro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Qalabka Saadaasha hawada » Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato waxyaabaha ku saabsan hygrometers-ka